Maninona (sy ny fomba) hampidirina ao anaty paikady nomerika | Martech Zone
Ny retargeting, ny fanazarana dokam-barotra amin'ireo olona efa niara-niasa taminao an-tserasera, dia lasa malalan'ny tontolon'ny varotra nomerika, ary misy antony marim-pototra: mahery vaika izy io ary mahomby tokoa.
Ny retargeting, amin'ny endriny maro samihafa, dia afaka manampy amin'ny paikady nomerika efa misy, ary afaka manampy anao hivoaka amin'ny fampielezan-kevitra efa tanterahinao. Amin'ity lahatsoratra ity dia horesahiko ny fomba vitsivitsy ahafahan'ny mpivarotra mampiasa ny famerenana amin'ny laoniny hanamafisana ny herin'ny fantsona efa ampiasain'izy ireo. Fa ity aloha, ity misy ambadika kely kokoa momba ny teknolojia mihitsy:
Ahoana sy ny antony fiasan'ny retargeting
Amin'ny endriny tsotra indrindra, retargeting mampiasa cookie iray tsotra sy tsy fantatra anarana hanaterana doka manokana ho an'ireo olona nitsidika ny tranonkalanao nefa nijanona tsy nividy. Tena mandaitra izy io satria mampifantoka ny doka amin'ny olona efa mahazatra sy mety ho liana amin'ny vokatrao na serivisinao. Io dia ahafahanao mampitombo ny fiovam-po eo amin'ireo antoko liana ary hitazona ny vidiny ambany amin'ny fitehirizana ny dolara doka ho an'ny mpihaino mahay indrindra anao.
Ny teknolojia mitovy amin'izany dia azo ampiharina amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa hafa, toy ny fanokafana mailaka, ary mety ho famenon-tsakafo mahomby amin'ny fitaovana marketing hafa ampiasanao hanatonana mpanjifa vaovao na hifaneraserana amin'ireo ankehitriny.
Famerenana amin'ny laoniny ireo mpivarotra fikarohana
Raha manokana tetibola lehibe ianao Fikarohana PPC, retargeting dia azo antoka fa tokony ampiana amin'ny arsenalanao nomerika. Ny doka fikarohana dia iray amin'ireo fitaovana matanjaka indrindra ahafahana mitondra ny fifamoivoizana voalohany amin'ny tranokalanao, fa ohatrinona amin'ireo olona ireo no niova fo tamin'ny fitsidihana voalohany? Raha toa ny ankamaroan'ny mpivarotra ianao, ny ankamaroan'ny olona entinao amin'ny tranokalanao dia tsy miova avy hatrany, raha mivadika mihitsy izy ireo. Eto no misy ny retargeting. Ny retargeting dia manampy anao hampitombo ny fiovam-po eo amin'ireo vinavin-tsoa tonga nitsidika ny tranokalanao, saingy tsy mbola nividy.
Raha miantehitra mafy amin'ny fikarohana PPC ianao, dia mandoa vola be hitondrana olona any amin'ny tranokalanao, ary ny retargeting dia afaka manampy anao hampitombo ny fandanianao. Raha mampiasa pejy fitobiana natokana ho an'ny fivezivezena hikarohanao karama ianao, dia tsotra dia tsotra ny mamerina mamerina mitsidika ireo mpitsidika avy amin'ny pejin-tranonao.
Famerenana amin'ny laoniny ireo mpivarotra atiny
Iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra hatrehana mpivarotra atiny mamadika ny mpamaky mahazatra ho mpanjifa. Na dia fomba mahomby tsy mampino aza ny marketing amin'ny atiny hamporisihana ny fitsidihana tranonkala vaovao, ny ROI tsara dia matetika sarotra be tokoa. Ny famporisihana ny fisoratana anarana amin'ny mailaka sy ny fanomezana lanja tsy tapaka dia afaka manampy, fa mety tsy ho ampy foana. Raha mahomby amin'ny fitaterana ny fifamoivoizana mankany amin'ny atiny ianao, saingy tsy mahita ny fiovam-po tadiavinao dia afaka manampy ny retargeting.
Azonao atao ny mamerina mamerina mitsidika ireo mpitsidika izay mankany amin'ny tranokalanao hamaky ny atiny ary hamporisika azy ireo hijery ny pejin'ny vokatra sy serivisy omena anay. Ny atiny dia manangana mpihaino mahasoa ho an'ny orinasanao, ary ny retargeting dia afaka manampy anao hamadika izany mpihaino izany ho mpanjifa.
Famerenana amin'ny laoniny ireo mpivarotra mailaka
Ny marketing amin'ny mailaka dia fitaovana fitobiana ho an'ny mpivarotra dizitaly maro. Raha mifantoka amin'ny mailaka ianao, dia mety tsy ho hita miharihary fa afaka manampy amin'ny fomba mahomby ny fitaovana fanaovana dokambarotra fampisehoana toy ny retargeting, fa ny famerenana mailaka indray no fitaovana mety indrindra ho an'ireo mpivarotra mailaka.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny mailaka dia ahafahanao manolotra doka an-tsehatra ho an'izay manokatra mailaka, na tsindrio izany na tsia. Alao an-tsaina ange raha izay rehetra manokatra ny mailakao dia afaka mahita ny marikao eo am-pitetezana ny tranonkala any aoriana? Izany indrindra no azon'ny retargeting mailaka atao. Tsy afaka mandefa mailaka be dia be fotsiny ianao nefa tsy mandreraka ny lisitrao, ary ny famerenana amin'ny laoniny ny mailaka dia manome fotoana hijanonana eo anoloan'ny mpandray ny mailakao nefa tsy handoavana hafatra mailaka be loatra.
Raha misalasala manomboka fanentanana amin'ny fampisehoana ianao satria efa nahavita fanentanana ara-barotra mahomby dia mety tsy ho ara-dalàna ny tahotrao. Ny retargeting dia afaka manampy anao hivoaka bebe kokoa amin'ireo fantsona efa ampiasainao, na inona na inona fantsona mety misy.
Tags: famerenana votoatyfamerenana mailaka mailakaretargeting fikarohana karamafamerenana indray ny ppcretargeting
Ny endrika vaovao fanatsarana ny motera fikarohana